ဥဇဘက်ကစ္စတန်, အာရှရှိ ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
ဥဇဘက်ကစ္စတန်, အာရှရှိ ဦး တည်ရာ
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, အာရှခရီးသွားခြင်း
ကမ္ဘာကြီးသည်ကြီးမားပြီးသွားရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့်အာရှတိုက်၏အကျော်ကြားဆုံးအာရှမှထွက်ခွာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည် အာရှအလယ်ပိုင်းရှိနေရာများရှားပါး၊ ထူးခြားဆန်းပြားမှု၊ ဥပမာ, ဥဇဘက်ကစ္စတန်။
ဒီတိုင်းပြည်ဟာမဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားရှိပြီး၎င်းရဲ့သမိုင်းကိုအလွန်ကြွယ်ဝစေတယ်၊ ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဥဇဘက်ကစ္စတန်အကြောင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းလေ့လာဖို့လိုတယ် turismo ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ အလယ်ပိုင်းအာရှ၌တည်ရှိ၏ ပင်လယ်ရေသည်ထွက်သွား၏။ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံများဝန်းရံထားသည်။ ဒီနေ့က လောကပြည်နယ် ပြည်နယ် ၁၂ ခုခွဲထားတယ်၊ မင်းမသိဘူး၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတင်ပို့သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အမြောက်အမြားရှိပြီးယနေ့တွင်၎င်းမှာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည် အကြီးဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူ အာရှ၏ဤအပိုငျး၏တနျခိုး။
၎င်း၏သမိုင်းနှင့်လူ့ရှိနေခြင်းအနှစ်တစ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၁၉ ရာစုမှစပြီးအဓိကတည်ရှိမှုသည်ရုရှားဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်အတူလက်တွဲပြီးသမ္မတနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများကိုကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရုရှားနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က၎င်းသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ။
မြို့တော်သည်တာ့ရှ်ကန့်ဖြစ်သည် ဒါဆိုမင်းရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးပဲ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းသာမကအာရှအလယ်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးနှင့်လူနေထိုင်မှုအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ဒါ ကာဇက်စတန်နှင့်နယ်စပ်အနီး၁၃ ကီလိုမီတာသာကွာသည်။ ၁၂၁၉ တွင်ထင်ရှားသော Genghis Khan ကဖျက်ဆီးခဲ့သည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ၎င်းသည်ပိုးလမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအလွန်ပြင်းထန်သောငလျင်လှုပ်ခြင်း၌လည်းရုရှားများကသိမ်းပိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အလွန်ဆိုဗီယက် physiognomy ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မော်စကို၊ လင်နင်ဂရက်နှင့်ကိယက်ဗ်ပြီးလျှင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၂၀၀ ကျော်သမိုင်းရှိသည်။ မင်းရဲ့ရာသီဥတုဘယ်လိုနေလဲ ကောင်းပြီ၊ မြေထဲပင်လယ်မှာရှိတယ် အအေးဆောင်းရာသီ တစ်ခါတစ်ရံဆီးနှင်းနှင့်အတူ ပြင်းထန်သောနွေရာသီ.
ဒီခေတ်မှာဘာကွတ်ကစ္စတန်နဲ့တူသလဲ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ် များမှစ၍ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်အိုင်ကွန်အချို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရသည်။ အဆောက်အအုံဟောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းများပြုလုပ်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်ဟိုတယ်များကိုစုစည်းထားသောခေတ်မီခရိုင်တစ်ခုပင်ရှိသည်။ သွားလည်ပတ်ဖို့ဘာရှိပါသလဲ
အမှန်တရားမှာ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင်ရုရှားတော်လှန်ရေးနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းသည်မြို့၏ရှေးအကျဆုံးနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံကြီးများကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သောကြောင့်အမွေအနှစ်အဆင့်တွင်အနည်းငယ်မျှသာကျန်တော့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရယနေ့အဘယ်အရာသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဆိုသော်ငြားဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
တ ဦး တည်းအခြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် Prince Romanov နန်းတော်Tsar Alexander III ၏ဝမ်းကွဲကတာ့ခ်ကန့်ကိုထုတ်ပယ်စဉ် ၁၉ ရာစုကအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှင်သန်ခဲ့ပြီးယနေ့ပြတိုက်ဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Alisher Navoi အော်ပရာနှင့်ဘဲလေးပြဇာတ်ရုံမော်စကိုရှိလီနင်၏သင်္ချိုင်းဂူနှင့်အတူတူပင်ဗိသုကာပညာရှင် Aleksey Shchusev ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤအဆောက်အ ဦး ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှဂျပန်အကျဉ်းသားများကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုအတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းရာနေရာမှဆောက်လုပ်ရန်နေရာတွင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ပြတိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှိသည် နိုင်ငံတော်သမိုင်းပြတိုက်မြို့ထဲမှာအကြီးဆုံး Amir Timur ပြတိုက်, လှပသောအပြာအမိုးခုံးများနှင့်လှပသောဥယျာဉ်များနှင့်စမ်းရေတွင်း, နှင့်အတူ အသုံးချအနုပညာပြတိုက်, သူ့ဟာသူအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသောရိုးရာအိမ်ကြီးတွင် operating ။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် အနုပညာပြတိုက်, မြို့တော်ရှိ Grand Duke Romanov ၏နန်းတော်ကိုအလှဆင်ရန်အသုံးပြုသော Hermitage ထံမှချေးငှားသောရုရှားခေတ်မှလက်ရာများနှင့်အနုပညာလက်ရာအချို့နှင့်အတူ။
La Telyashayakh ဗလီဂအပေါ်တစ် ဦး ဘဏ္hasာကိုရှိပါတယ်: အ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးကုရ်အာန်ဤသည်မှာ ၆၅၅ ခုနှစ်မှစ၍ Uthman တို့၏သွေးနှင့်စွန်းထင်းနေသောစာသားဖြစ်သည်။ ထည့်ပါ Chorsu Bazaar, ပွင့်လင်းသောလေ, ကြီးမားတဲ့, ရောင်းဖို့အရာအားလုံးနှင့်အတူမြို့၏သမိုင်းဝင်စင်တာအလယ်၌, နှင့် Yunus Khan Mausoleum၁၅ ရာစုတွင်ယူဂိုခန်၏သင်္ချိုင်းနှင့်အတူမဟာဂိုအင်ပါယာကိုတည်ထောင်သူအဘိုးဘာဘူ။
ဒီဆွဲဆောင်မှုများအပြင်, Ташкентတွင်ကျယ်ပြန့်သည့်လမ်းများ၊ လှပပြီးအလွန်အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများရှိသည်အရောင်အသွေးစုံလင်လှသည့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ငယ်များနှင့်အတူဗလီများသည်လမ်းလျှောက်။ ကောင်းမွန်သောအမှတ်တရများနှင့်အရသာများစွာကိုမြည်းစမ်းရန်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဥဇဘတ်ကစ္စတန် ၎င်းသည်ဗဟိုအာရှတွင်အချမ်းသာဆုံးနှင့်အရသာဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းပွဲအချို့ကိုမသုံးဘဲမထွက်နိုင်ပါ။ kabob boin gusht (သိုးသငယ်လည်ပင်းစွပ်ပြုတ်), shivit osh (အစိမ်းရောင်ခေါက်ဆွဲ၊ အနည်းငယ်အချဉ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ)၊ kebabs, manti (dumplings), samsa (stuffed buns), နှင့်သင်တန်း၏, ကဗျာ။
La ယူနက်စကို pilaf မှကြေငြာခဲ့သည် ချစ်သူ, သင်ကဒီမှာန်းကျင်ကိုပြောသည်နေကြသည် ကမ္ဘာ့ intangible ပိုင်ဆိုင်မှု: ဆန်၊ အသား၊ ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥနှင့်အမျိုးမျိုးသောနံ့သာမျိုး။ ဒါဟာနေ့စဉ်ဘဝ, မင်္ဂလာဆောင်, အသုဘသို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားမှာဘုံပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အလွန်ဟောင်းနွမ်းပန်းကန်။ သင်ဟာ pilaf ကိုမကြိုးစားဘဲဥဇဘက်ကစ္စတန်သို့မရောက်နိူင်ပါ၊ အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောချက်ပြုတ်နည်းတစ်ရာ။
သို့သော်ဥဇဘက်ကစ္စတန်သည်၎င်း၏မြို့တော် Tashknet ထက် ပို၍ ကမ်းလှမ်းပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်အမြဲရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နေရာများလည်းရှိသည် အလွန်ကြီးသောကြောင့်လူသိများသည့် ဦး တည်ရာဖြစ်သည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ၏မြို့အလယ်ဗဟိုအဖြစ် ပိုးလမ်းမ မြေထဲပင်လယ်ကိုတရုတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
၂၁ ရာစုအစမှ စ၍ ယူနက်စကိုသည်၎င်းကိုအမည်ပြောင်းခဲ့သည် Samarkanda, ယဉ်ကျေးမှု၏လမ်းဆုံ။ ဒီမြို့မှာပြတိုက်တွေ၊ မဒရပ်စ်ဒါမှမဟုတ်ဗလီတွေရှိတယ်။ ပုံပြင်၏ဒဏ္legာရီ၏နာမနှင့်အတူတစ်မြို့။ ၎င်းကိုလှေကားထစ်များနှင့်မြင့်မားသောတောင်များကဝိုင်းရံထားသည်။ မြို့ဟောင်းမှာမူများများမကျန်ရှိသေးသော်လည်းအနည်းဆုံးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုမရှိသည့်နေရာကိုလည်ပတ်ရန်မှာပင်ဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်အတွင်းနောက်ထပ်ခရီးသွား ဦး တည်ရာသည် ယူနက်စကိုမှအကာအကွယ်ပေးထားသောသမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ masadrasas, minarets, ဗလီ, ရှေး citadels, သင်္ချိုင်းနှင့်ဂူအဆောက်အ ဦး များရှိပါသည်။ Muynak မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ်းခြေနှင့်အတူငါးဖမ်းမြို့ဖြစ်ပါတယ် မြစ်ချောင်းများ။ တစ်ချိန်ကသူသည်ပင်လယ်၏အစွန်းတွင်ရှိခဲ့သည် Aral ပင်လယ်, သို့သော်ယနေ့တွင်ပိုမိုခြောက်သွေ့လာပြီးသင်္ဘောသင်္ချိုင်းတစ်ခုပင်ရှိသည်။
အတိတ်သို့ငုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် Khiva, တူရကီသမိုင်း၏ 2500 နှစ်ပေါင်းရှေးဟောင်းနံရံများ၊ ရွှံ့အဆောက်အ ဦး များ၊ ဗလီများ၊ ဤအရာအလုံးစုံ, ကံကောင်းတာက, ယူနက်စကိုကကာကွယ်ထားသည်။ Shakhrisabz သည်လည်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ရှေးဟောင်း အတွင်း၌ပါရှိသော ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းစိမ်းလန်းသောမြို့၊
ဤတွင် Ak-Saray နန်းတော်အပျက်အယွင်းများ၊ Kok-Gumbaz ဗလီ၊ Dor-ut Tilovat အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ၏အပျက်အယွင်းများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်သည်ကားတစ်စီးငှားလျှင်တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းကိုပင်တက်နိုင်ပြီး မာကိုပိုလို၏ခြေရာကိုနင်းပါ။ ဘယ်လိုလဲ?
စင်ကာပူနိုင်ငံသည်ဥဇဘက်ကစ္စတန်တစ်မြို့တည်းသာမဟုတ်၊ Zaamin, Termez, Gulistan, Nukus, Karshi နှင့်အခြားသူများလည်းရှိသည်။ တာ့ရှ်ကန့်၊ ဆမာကကန့်၊ ဘူခါရာ၊ ခီဗာနှင့်ရှာကရစ်စဘတ်တို့သည်ပိုးလမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
ဒီကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကုန်သွားရင်ကောင်းတဲ့အကြံကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် ဥဇဘက်ကစ္စကိုသွားပါ နှင့်အခြားနယ်မြေများမှဖွင့်လှစ်။ သင်ဗီဇာလိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအွန်လိုင်းတွင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံ ၈၆ ခုတောင်မှယင်းကိုလုံး ၀ မလိုအပ်ပါ။ သတိရပါ၊ ဤနေရာတွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပြင်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လူမျိုးစုဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်လူငယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာစခန်းများနှင့်လူငယ်ဘော်ဒါဆောင်များ၊ နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများနှင့်ဈေးပေါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အခြားယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်သိရန်ကြိုးစားနေပါသလော။ ထိုအခါဥဇဘက်ကစ္စတန်သည်သင့်ကိုစောင့်နေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဥဇဘက်ကစ္စတန်, အာရှရှိ ဦး တည်ရာ